Zọ kacha mma Forex Forex Eprel 2021 | Mmụta Forex kacha mma - Mụta ahia 2
Bụrụnụ ndị na-a Forex Forex Trader
Mụọ 2 ahia Forex N'ezie
£ 99 Otu ugboroỊkwụ ụgwọ
Nweta The Learn 2 Trade Forex Course Free, Naanị Mepee Akaụntụ na eToro ma Mee Nkwụnye Aka!
Nweta Usoro ahụ n'efu!
Mepee isi 11 niile maka naanị £ 99!
Mara mgbe ahia na mgbe ịghara!
Mụta site na ekwentị gị ma ọ bụ na desktọọpụ gị!
Ọzụzụ ọkachamara site n'aka ezigbo ndị ahịa!
Nweta otu afọ adịchaghị na akaụntụ n'ihi na free!
Debanye mmasị gị na onye mmekọ gị, FCA na-achịkwa FX / CFD broker, eToro ma nata Mụta 2 Trade VIP Forex Signals for FREE for one year!
CFDs bụ ngwa mgbagwoju anya ma nwee nnukwu ihe ọghọm nke ịlafu ego ngwa ngwa n'ihi itinye ego. 70.16% nke ndị na-ere ahịa na-ere ahịa na-efufu ego mgbe ha na-ere CFDs / Gbasa nzọ na ndị na-eweta ọrụ a. Should kwesịrị ịtụle ma ị ghọtara otú ọrụ CFDs / Spre ịkụ nzọ si arụ ọrụ yana ị nwere ike ibute nnukwu ihe ọghọm nke ịkwụsị ego gị.
Bido The Mụta 2 Trade Forex Course!
Nweta ọtụtụ ndụmọdụ, ọmụmụ ihe, ihe atụ na ego, ha niile dị na enyi na enyi, dị mfe nghọta, na-enweghị nghọta
Nwaleenụ ihe ọmụma gị na pụrụ iche quizzes, zụọ onwe gị mgbe ọ bụla isi
Mee ihe niile ị mụtara na akaụntụ gị, yana ọnụego ahịa dị ndụ
Agụmakwụkwọ anyị nwere ihe niile ịchọrọ ịmụ iji bụrụ onye na-azụ ahịa Forex. Were uru ahịa azụmaahịa na nkuzi 11 wee mụta otu esi azụ ahịa Forex dị ka ọkachamara.
Site n'iji usoro ahia Forex anyị, ị ga-amụta:
Ghọta ohere azụmaahịa
Ahuhu ngagharị nke ego ọnụego
Eburu amuma ọdịnihu na mmetụta ha na ego
Jiri ngwa oru na ihe enyemaka nile nke ahia di iche iche nyere
Mejuputa oru na isi nyocha
Malite na-eme uru na-amalite njem gị ịga nke ọma!
Dị ahia dị iche iche
Nke a bụ ndepụta zuru ezu nke isi, nkuzi, na isiokwu ị ga-ahụ na Mụta 2 Trade Trading Course:
Nkwadebe maka Mụta 2 Trade Trading Course
Ahịa Forex bụ ahịa zuru ụwa ọnụ nke ego (a na-akpọ ngwá). Ahịa ahụ na-atụle uru nke ego na usoro nke ego ọzọ (eg. $ 1 = £ 0.66).
Nzọụkwụ mbu na Mụta ahia 2 - Nkọwa Okwu
Ọ dị ezigbo mkpa ịmara Mụta 2 Trade Terminology iji zụọ ahịa nke ọma. Okwu okwu a di nkpa ka ogugu akwukwo ego.
Mekọrịta Oge na Ebe maka Trazụ ahia Forex
Oge erugo ịmụtakwu banyere ahịa. Nzọụkwụ nzọụkwụ anyị site na Forex na-aga n'ihu. Ya mere, tupu ịba n'ime mmiri miri emi, ka anyị buru ụzọ mee ụkwụ anyị, ma jiri ọnọdụ okpomọkụ used ma lekwasị anya na usoro azụmaahịa ndị a:
Nweta maka ịmụ ihe 2 Trade
Ugbu a ị zọchara mkpịsị ụkwụ gị, anyị adịla njikere ịmalite nkuzi igwu mmiri… Ka anyị maba n’ime. Anyị ga-amalite ugbu a ịnye gị ngwa ọrụ ndị dị mkpa iji bụrụ ndị na-azụ ahịa ahia 2 Mụta.
Isi ihe omumu 2 Usoro ahia
Mgbe ụfọdụ ụzọ dị mkpa dị mkpa karia ọrụ nka. Site na George Soros ruo Warren Buffet, ụfọdụ ndị ahịa ama ama n'ụwa niile ekwetala na ha ji akụnụba ha nyocha nyocha ha mere kemgbe ọtụtụ afọ.
Nka na ụzụ Forex Trading
Oge eruola ka ị banye n'ime oke ihe wee bido ịmụ gbasara nyocha teknụzụ, otu n'ime usoro azụmaahịa azụmaahịa kachasị mma. N'Isi nke 6 anyị ga-atụle ụfọdụ n'ime usoro azụmaahịa azụmaahịa kachasị ewu ewu.
Ihe njirimara Fibonacci
N'isiokwu abụọ na-esote, ị ga-enweta nkọwa zuru ezu na igbe ọrụ teknụzụ gị. Ọkachamara ọ bụla nwere ọrụ ọrụ ya yana yabụ ndị ahịa Forex. Ngwaọrụ anyị nwere ọtụtụ ngwaọrụ nyocha. Ngwaọrụ ndị a na-enye aka maka ịrụ ọrụ nke ọma, nyocha ọrụaka ọkachamara (nke n'otu oge, n'ọtụtụ ọnọdụ, na-akwado mkpebi ndị bụ isi).
More Nka na ụzụ Trading egosi
Mgbe anyị zutere Mazi Fibonacci, oge eruola ka ị mata ụfọdụ ihe ngosi ọrụ ndị ọzọ ama ama. Ihe ngosi ndi ichoro ima banyere ha bu usoro na ihe omuma. Ka ọnụahịa na-agbanwe oge niile, ndị na-egosi ya na-enyere anyị aka itinye ọnụahịa n'ime usoro na sistemụ.
Ngwakọta 6 na-egbu egbu maka atụmatụ aghụghọ
N'Isi nke 9 anyị ga-egosi gị usoro aghụghọ ị nwere ike ijikọ iji nweta nsonaazụ kacha mma (abụọ na-adịkarị mma karịa otu).
Egwu na Ego Management
Isi nke 10 - Egwu na Ego Management anyị ga-atụle otu esi abawanye uru gị ma belata ihe egwu gị, jiri otu ngwaọrụ kachasị mkpa nke azụmaahịa azụmaahịa - ego kwesịrị ekwesị na njikwa ihe egwu. Nke a ga - enyere gị aka belata ihe ọghọm gị ma kwe ka ị nweta uru dị mma.
Mụọ ahia 2 na Mmekọrịta na Ahịa na Azụmaahịa na MetaTrader
N’Isi nke 11 –Mụọ 2 Trade na Mmekọrịta nke Ahịa na Ahịa na Azụmaahịa na MetaTrader ị ga-amụta maka mmekọrịta dị n’etiti ebuka, ndeksi, na ngwa ahịa na ahịa ahịa 2 na-amụ. Na mgbakwunye, ị ga-amụta otu esi ahụ maka ikpo okwu MetaTrader.
Forex Course & Forex - n'ụzọ ọzọ a na-akpọ 'FX', bụ ahịa kachasị ahịa na nke kachasị mmiri n'ụwa niile. Ọ gụnyere ịzụ ahịa ego ehihie na abalị, 24/7. Na ndị nwere oke gụnyere ndị ahịa, ụlọ akụ, ndị na-etinye ego na ndị njem nleta - Forex mejupụtara ịwepụ otu ego ọzọ.
Dị ka alụmdi na nwunye nke ego na mgbanwe - ndị ahịa gburugburu ụwa na-azụ ma na-ere ego ndị a n'echiche nke inweta uru ma ọ bụ ịgba ọkụ. Ọchịchọ na ọkọnọ kpebisiri ike na ahịa ndị a bụ ihe na-eme ka ọnụego mgbanwe ego gbanwee.
Ma ị dị ọhụrụ na azụmaahịa azụmaahịa ma ọ bụ bụrụ onye ahịa azụmaahịa, ihe ọmụma bụ ike. Dị ka ndị dị otú a, otu ndị ọkachamara anyị nọ ebe a Learn 2 Trade etinyela ọnụ ntuziaka jupụtara na ozi bara uru.
N'ime usoro iwu a, anyị ga-agba gị ọsọ n'ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ịzụ ahịa ego. Nke a gụnyere usoro okwu, nyocha teknụzụ, ọgụgụ eserese, atụmatụ azụmaahịa, njikwa ihe egwu, na ndị ọzọ!
Gịnị bụ Forex?
Forex bụ n'ụzọ bụ isi ahịa mba ọzọ, nke dị na London Stock Exchange ma ọ bụ NASDAQ, mana maka ego si gburugburu ụwa. Mgbe ụfọdụ a na-akpọ FX, Forex na-ahụ maka mgbanwe mgbanwe maka ego abụọ (nke a na-akpọ di na nwunye). Onye ọ bụla nwere ike isonye ma gbalịa nweta uru na ahịa ahịa a.
Na ụlọ ọrụ, ụlọ akụ na ndị na-etinye ego na-azụ ma na-ere ego mba ofesi 24 awa ụbọchị na ụbọchị asaa n’izu ụka, o doro anya na azụmaahịa azụmaahịa na-abawanye ama n’etiti ndị na-etinye ego na ndị ahịa gburugburu ụwa. Na ahia ahia ahia ahia ahia US dolla 5 kwa ubochi, ahia mbu na egosighi ihe ngbagha.
Ọnọdụ ahia a na-ekpuchi ọtụtụ ebumnuche, dị ka ịgbanwe ego mba ọzọ maka njem, ụlọ ọrụ na-achọ ịgbachi ihe ize ndụ, ma ọ bụ ikekwe naanị ịme ahịa nke nwere ike ịba uru. Ihe ọ sọrọ ya bụrụ ya kpatara ya, otu n'ime ihe dị mkpa na-adọta bụ eziokwu bụ na mgbe ị mepee ọnọdụ, ịnwere ike itinye nkwụsị nkwụsị na-akpaghị aka, nke na-emechi azụmahịa ahụ maka gị n'ihe egwu.
N'ikpeazụ, site n'echiche gị, isi okwu banyere ahịa Forex bụ ire ma ọ bụ zụta ego megide ibe gị, iji nweta ego. Will ga-emezu ebumnuche a mgbe ị na-eche n'ụzọ ziri ezi otu ụzọ mgbanwe mgbanwe na-aga na obere oge.
Na-esote na usoro iwu a, anyị ga-agba ọsọ site na ụfọdụ ahịrịokwu okwu na okwu kachasị eji eme ihe na oghere.
Usoro Forex: Okwu Ndị A Na-ejikarị
Anyị na Mmụta 2 Trade kwenyere na igbutu jargon dị oke mkpa ma a bịa n'ịmụta na ịmịnye aka na nka gị.
N’okpuru ị ga-ahụ ndepụta nke okwu kachasị mkpa ịkwesịrị ịma.
Dị ka a pụrụ isi kwuo ya, ụzọ ego abụọ a na-ewere dị ka mmiri mmiri bụ ego ndị kachasị ewu ewu (ọkọnọ na ọchịchọ). A maara ndị a dị ka 'isi ụzọ abụọ'. Ntinye ego nke ndị ahịa, ụlọ akụ, ndị na-ebupụ ahịa na ndị na-ebubata ngwa ahịa na -emepụta mkpa na mkpa a niile.
Ezigbo ihe atụ nke ụzọ ego mmiri mmiri ga-abụ EUR / USD. N'ezie, a kwenyere na nke a bụ ụzọ ego kachasị mmiri mmiri na ahịa ahịa. Ọzọ nke a agbadata iji nye ma chọọ, ma si otú a - ọ bụ ụzọ ego kachasị azụ ahịa.
EUR / USD na-enye ndi ahia ahia di iche iche. Nke a bụ n'ihi ọnụ ọgụgụ buru ibu nke pips na-akwagharị kwa ụbọchị. N'ihe dị ka pips 90 na 120 dị oke egwu, o doro anya ịhụ ihe kpatara eji ewere nke a dị ka mmiri mmiri.
Fọdụ ndị ọzọ na-ewu ewu ego ụzọ abụọ ndị dị ka ndị:
GBP / USD: Great Britain Pound / Dollar United States
AUD / USD: Dollar Australia / Dollar United States
USD / JPY: Dollar United States / Japanese yen
USD / CAD: Dollar United States / Dollar Canada
USD / CHF: Dollar United States / Switzerland Franc
Ndị a bụ ihe atụ ole na ole ma a bịa n'ihe gbasara obere ego na obere ego
EUR / GBP: Euro / tergha.
NZD / JPY: Dollar New Zealand / Japanese Yen.
GBP / JPY: Great Britain Pound / Japanese Yen.
EUR / AUD: Euro / Dollar Australia.
GBP / CAD: Pound Britain buru ibu / Dollar Canada.
AUD / HKD: Dollar Australia / Hong Kong Dollar
Ọ bụ ezie na ha anaghị ewu ewu karịa ndị isi, ọ gaghị ekwe omume ịme nke ọma site na ụzọ abụọ ndị a nwere obere ọmụma.
Agbanyeghị, dịka ọmụmaatụ, AUD / NZD anaghị ebugharị ọtụtụ pips na ụbọchị ahia, anyị chere na ọ ka bara uru ịmara onwe gị na ụzọ ego abụọ. Ka ị matakwara na ị ga-akwadebe nke ọma - ọ bụrụ na ị kpebie inye obere ma ọ bụ osisi abụọ ụzọ abụọ gara aga.
Pip (Point na Pasent)
The pip bụ onye nnọchiteanya nke kasị ala ego na a ego ụzọ kwuru nwere ike ịgbanwe, n'ime Forex trading ahịa. Otu pip, nke pụtara 'isi na pasent', na-egosi obere mgbanwe ọ bụla akara na ụzọ mbata ego.
Ntọala ntọala na ụgwọ nke otu ụzọ ego bụ pip, yabụ 0.0001 nke ọnụahịa e hotara.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ọnụahịa ego maka EUR / GBP ego gbanwere site na 1.15701 ruo 1.15702, nke a na-egosi gị dị ka onye ahịa na ọdịiche dị bụ otu pip.
Ọbụna ma ọ bụrụ na ị nwere naanị ịghọta isi nke Forex trading, ị ga-enweghị obi abụọ nụrụ nke mgbasa. Inwe nghọta dị nkenke banyere mgbasa na otu o si arụ ọrụ n'ahịa ahịa nwere ike inyere gị aka inweta uru na ogologo oge.
N'ikwu okwu n'ozuzu, ụdị ego ego kachasị eji eme ihe ga-agbasawanye, ndị kachasị ewu ewu ga-enwe mgbasawanye dị elu. Mgbe ụfọdụ, ụzọ abụọ ego kachasị eji eme ihe nwere ike ịnwe mgbasa nke ihe na-erughị pipụ.
Mgbasa ahụ bụ ọdịiche dị n'etiti ọnụahịa ịzụta na ire ere nke ụzọ ego, na onye ị họọrọ. Ọnụ ego ndị a ga-agbanwe ma na-efegharị n'ụbọchị ahia, na ihe ọ bụla mere, na-egosipụta site na mgbasa.
Uru ị ritere na azụmaahịa ga-akarị gbasaa ka ị wee nwee uru.
Anyị enweghị ike ịmepụta akwụkwọ azụmaahịa na-aga n'ihu na-enweghị ikwu maka oke. ka emechara, oke dị oke mkpa nke azụmaahịa Forex.
Ego ole onye ahia tinyere iji wee tinye ahia ma obu jigide onodu a na akpo oke. Nke a nwere ike ịbụ nnukwu ụzọ maka ndị ahịa iji wulite atụmanya ahịa ha.
Oke ahia gị ga-echekwa gị n'akụkụ ebe ahia a na-emeghe. N'ikpeazụ, oke dị ntakịrị ka ịkwụ ụgwọ, kama ịkwụ ụgwọ azụmahịa.
Ndị na-ere ahịa Forex ga-enye ndị ahịa ha ohere ịnweta leverage (lee anya n'okpuru). Dị ka ọ dị, onye ahịa azụmaahịa chọrọ oke oke ka ha wee nwee ike ịzụ ahịa na nnukwu mpịakọta. Ka o siri dị, a ga-enye iji nweta uru zuru ezu iji nweta uru bara uru.
Maka ọtụtụ ndị na-azụ ahịa azụmaahịa, ngwa ngwa ndị eji ego ha nyere nwere ike ịbụ ụzọ dị mma iji bulie ọnọdụ ahịa. A na-egosiputa isi obodo n'ụdị leverage, ma nke a bụ ndị na-ere ahịa azụmaahịa nwere ike ịgbasa ọnụọgụ ahịa ọ nwere ike inye ndị ahịa ya.
Tupu ịmalite ịmalite ịzụ ahịa ebe ị na-ejikwa ihe ị na-eme, ị ga-achọ imeghe akaụntụ oke na onye na-ere ahịa na mbụ. Dabere na ọnọdụ nke ọnọdụ gị yana onye na-ere ahịa na ajụjụ, itinye ego na-abụkarị ihe dị ka 200: 1. Ma, UK na ndị ahịa na-ere ahịa na Europe na-agbakarị na 1:30 - dị ka iwu ESMA si dị.
Ndị otu anyị na Learn 2 Trade ejirila ihe atụ atọ nke leverage.
Ihe Nlereanya 1: Y’oburu n’itinye $ 100 n’ego 1:10, ahia gi ruru $ 1,000. Ọ bụrụ na iburu uru nke $ 40 na mbụ, nke a ga-abawanye na $ 400.
Ihe Nlereanya 2: Ọ bụrụ na leverage gị bụ 1: 20 ma ị nwere $ 1,000 na akaụntụ azụmaahịa gị - ị nwere ike ịzụ ọnọdụ nke $ 10,000 na ụzọ ego gị. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, uru na ọghọm niile na-abawanye site na 20x.
Ihe Nlereanya 3: Ọ bụrụ na ị nwere ogologo ọnọdụ GBP / USD nke nwere oke $ 500 na ntinye nke 1: 30, uru na ọghọm gị ga-abawanye site na 30x. Yabụ, ọ bụrụ na ị nweta uru nke 10%, uru gị ga-aga site na $ 50 ruo $ 500.
Dị ka ìhè na ọchịchịrị, ihe na-eweta ụgwọ ọrụ nwekwara ike iweta mfu. Mara mgbe niile na itinye ego nwere ike ịdị mma maka ịkwalite uru ndị ahụ, ọ nwekwara ike ịbawanye ọghọm ma ọ bụrụ na ị kpacharaghị anya.
Ọ bụrụ na akaụntụ gị adịghị ada n'okpuru efu, mgbe ahụ ị ga-enwe ike ịkpọtụrụ onye na-ere ahịa azụmaahịa gị iji rịọ iwu na-adịghị mma. N'ime ime nke a, nke a ga-eme ka ị ghara idafu ego karịa karịa itinye ego na mbu.
Ọ bụ nnoo ihe nchebe nye ndị ahịa ma nye gị udo nke uche na ị naghị abanye n'ụgwọ na onye na-ere ahịa azụmaahịa gị. Ozi ọma ahụ bụ na ọtụtụ ndị na-ere ahịa na ntanetị na-enye nchebe na-adịghị mma na-akpaghị aka, n'agbanyeghị, ị kwesịrị ịlele nke a tupu ịbanye. Nke a bụkarị ikpe na ndị na-ere ahịa na-adaba na nnyefe nke ESMA.
Forex Trading: A na-ejikarị Iwu
N'akụkụ a nke usoro iwu anyị, anyị na-akọwa ụfọdụ iwu ahịa a na-ejikarị eme ihe, yana nkọwa nke ọ bụla. Nke a dị oke mkpa, dịka a ga-enyefe iwu ndị a n'aka onye na-ere ahịa azụmaahịa gị, iji mee ka ha nwee ike rụọ ọrụ n'ọnọdụ gị.
Zụta ma Ree Iwu
Y’oburu n’onye ahia ka ichoro ka onu ogugu rida, igha ‘achapu’. Ihe kpatara nke a bụ na iji rite uru site n'ịzụta akụ ahụ na ọnụego dị ala, ị ga-etinyerịrị 'ire ere'. N'otu aka ahụ, ọ bụrụ na ịchọrọ na ọnụahịa nke ụzọ abụọ ahụ ga-abawanye, ị na-etinye 'ịzụta iwu', nke a maara dị ka 'ịga ogologo'.
Simplezọ dị mfe ị ga-esi lelee ọnụ ụzọ ego bụ na ọ ga-adabere n'ihe uru nke ego 2 bụ, yana ego ole ị nwere ike ịgbanwe ego 1 maka. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọnụahịa ego ọnụahịa ga-adabere na ọnụego mgbanwe ugbu a maka ego (dị ka ụzọ). Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ọnụahịa EUR / USD dị na 1.14, mgbe ahụ ị na-enweta 1.14 USD maka 1 EUR ọ bụla.
Onye na-ere ahịa azụmaahịa ga-enye gị nzụta (ịzụta iwu) na ire ere (ire ere) dabere n'akụkụ nke ọnụ ọgụgụ ahụ. Ihe dị iche n'etiti ọnụahịa abụọ ahụ bụ mgbasa.
Ugbu a, ka anyị kwuo na ị zụtala ngwa ọrụ ego dịka GBP / JPY wee họrọ ịnọ ogologo oge. Nke a pụtara na ị na-ebu amụma na GBP ga-aba na uru megide JPY. Ọ bụrụ na ị zụrụ ụzọ GBP / JPY ugboro abụọ, ọ pụtara na ị nwere ogologo oge 2 nke otu ụzọ ego (USD / JPY). Isi ego na ụzọ a bụ GBP, na ọnọdụ nke ọnọdụ bụ 2 nza (contracts), na ntụziaka bụ 'ogologo'.
A na-akpọkwa iwu ịgba ụgwọ, nke a bụ iwu iji kwuo na ịchọrọ ịbanye n'ahịa na ọnụahịa a kapịrị ọnụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ọnụahịa GBP / USD dị na 1.30 mana ịchọrọ ịbanye n'ahịa ahụ mgbe ọ kụrụ 1.29, ị ga-achọ itinye usoro ịgba. Naanị mgbe ebido ụgwọ ọnụahịa gị, usoro a ga-adị ndụ. Ruo oge ahụ, ọ na-anọ n'ọnọdụ nke 'na-echere'.
Usoro a na-agwa onye na-ere ahia gị na ịchọrọ ire ‘nchekwa’ ozugbo ụgwọ ruru ọnụahịa. Ebumnuche ebe a bụ iji nyere aka belata ọnwụ gị na ọnọdụ nchekwa.
Ntinye ego na-agwa gị onye na-ere ahịa azụmaahịa na ịchọrọ imechi azụmaahịa gị ma ọ bụ ọnọdụ gị ozugbo ọnụahịa ruru otu ọkwa uru ọnụahịa. Yabụ, ndị fundamentals na-arụ ọrụ otu ihe ahụ dị ka usoro nkwụsị-ọnwụ, mana ntụgharị ihu.
Chaatị Forex Forex
N'akụkụ a nke usoro iwu anyị, anyị ga-abanye n'ime sịnịma ndị a na-ejikarị. N'ihi ọtụtụ ihe nyocha ndị ọrụ ntanetị dịịrị gị dị ka onye na-azụ ahịa, e nwere ọtụtụ ụzọ ị ga-esi mee ka ohere ị nweta uru bawanye.
N'ozuzu, ndị ahịa na-eji chaatị ndị Forex kwa ụbọchị iji nyochaa ma nyochaa ọtụtụ ụdị ego abụọ, yana ahịa ego ọzọ. N'okpuru wm tinye ọnụ ndepụta nke chaatị ndị a kacha eji azụ ahịa azụmaahịa, yana nkọwa maka otu onye si arụ ọrụ.
Usoro akara bụ otu n'ime eserese dị mfe, yabụ ọ bụ mmalite mmalite ma ọ bụrụ na ị bụ onye ahịa ọhụụ. N’ụzọ dị oke mkpa, ọ ka na-enye aka maka ndị ahịa ịmụ ihe ma a bịa n’inyocha nnukwu foto. Styledị elementrị nke ọnụahịa ọnụahịa bụ otu n'ime ihe ndị na-eme ka ọ mara ewu ewu. N'ihi ụdị ejiji eji, ndị ahịa na-enwe ike iwepụ ụfọdụ 'mkpọtụ na-eme mkpọtụ' nke ahịa ahụ ma lekwasị anya na eziokwu ndị dị mfe.
Ọ dị mma ịmara na eserese akara dị iche na chaatị eserese na ihe ndọba oriọna (lee anya n'okpuru). Nke ikpeazụ, dịka ọmụmaatụ, gosipụtara oghere na mmechi nke oge, gụnyere omume ọnụahịa. The akara chaatị na aka nke ọzọ na-egosi naanị otu erikwa akara, nke bụ nnoo a ntule. Nke a na - ejikọ mmechi nke oge ọ bụla.
Iji maa atụ, mgbe ị na-elele eserese akara ụbọchị nke na-egosipụta price edinam na GBP / AUS, akara ngosi gosipụtara ga-anọchite anya ọnụahịa ọnụ na ụzọ ahụ. Egosiputara nke a site na ijikọ nsonaazụ na ịfu kwa ụbọchị. Dị ka usoro iwu ọ bụla dị mma ga-agwa gị, eserese ọnụahịa dị ka ihe nzacha bara uru maka ndị mmadụ na-achọ inyocha ozi na ahịa na-arụsi ọrụ ike.
Ihe ngosi akara ahụ gosipụtara ọdịdị nke ahịa site n'igosi naanị ọnụahịa mmechi. Site na itinyeghị uche n'ihe omume ọnụahịa n'ime mmechi na imeghe ọnụahịa ahịa, eserese akara na-eme ka ọnọdụ dị mfe nghọta, yana usoro a na-ahụkarị nke ọma.
OHLC (Mepee, High, Low, Close)
Ọ bụ ezie na eserese ọzọ na-enye aka maka ndị ahịa, OHLC dị iche na eserese ahịrị. Nke a bụ isi n'ihi na ọ bụ eserese mmanya, ma gosipụta ọtụtụ ozi ndị ọzọ dịka mmalite na ọnụahịa dị ọnụ ụzọ abụọ ahụ, yana akwa na ala. Ihe osise OHLC mmanya bu ezigbo uzo ka imuta ihe ojoo obula ma obu odi nma. A ga-eme nke a mgbe niile n'ime oge a kapịrị ọnụ, ma nke ahụ bụ 1 hour ma ọ bụ ụbọchị ahia dum.
Ogwe ọ bụla ị na-ele na chaatị OHLC ga-anọchite anya oge. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-elele eserese kwa ụbọchị, mmanya ọ bụla ga-anọchi anya ụbọchị ahia zuru oke ma na-aga ịdọrọ uche gị gaa na mmegharị ọ bụla na ọnụahịa n'ime oge ahụ.
Anyị achịkọtara isi okwu ole na ole ga - enyere gị aka ịghọta OHLC:
Ala nke ogwe eserese bụ iji gosipụta ọnụahịa ahịa kachasị dị ala - n'ime oge akọwapụtara oge.
Ihe dị elu nke ihe osise eserese bụ iji kọwaa ọnụahịa ahịa kachasị elu - n'ime oge akọwapụtara oge.
Ihe nkụgba dị n'aka nri nke mmanya na-egosipụta ọnụahịa mmechi.
Ihe mkpuchi ahụ dị n'aka ekpe nke ụlọ mmanya ahụ na-egosi ọnụahịa mmalite.
A na-akpọkwa ụlọ ahịa onye na-azụ ihe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, nke a na-egosikwa na ọnụahịa mmeghe karịrị ọnụahịa mmechi.
A na-akpọkwa ebe a na-ere ihe na-acha ọbara ọbara, nke a na-egosikwa na ọnụahịa mmeghe dị ala karịa ọnụahịa mmechi.
Mgbe ndị ahịa na-amụ ihe ụzọ akụ na mmegharị ọnụ ahịa nwere ike ịga, OHLC bụ ụzọ na-enye aka iji nweta foto doro anya.
Ndị ahịa Japanese na-ere osikapa izizi jiri mmalite 1700s mee ihe, akara oriọna ugbu a bụ ihe ewu ewu n'etiti ndị ahịa n'ụwa niile. Ihe ndọba oriọna ahụ yiri nke OHLC eserese anyị kwuru maka oge gara aga. Nke a bụ n'ihi na ndị ahịa nwere ohere imeghe, imechi, obere na nnukwu ụkpụrụ n'ime oge akọwapụtara.
N'ihi oriọna oriọna nke etu ihe eji eme ọnụ ahịa na ịdị mfe n 'ọhụhụ anya, a na-eche na ọ bụ otu n'ime eserese kachasị ewu ewu maka ndị ahịa azụmaahịa.
Ga-ahụ isi okwu 3 dị iche na 'kandụl ọnụahịa':
Mepee: Nke a bụ aru nke kandụl ma gosipụta ọnụahịa mmalite nke ihe onwunwe n'ime oge ahọrọ.
Mechie: Nke a bụ ahụ nke kandụl ma na-egosipụta ụgwọ ngwụcha nke ngwongwo n'ime oge ahọrọ.
Uhie: A na-akpọkwa dị ka onyinyo ahụ, wick na-egosi njedebe ọnụahịa maka oge a kapịrị ọnụ. Wick na-enye aka maka ịkọwapụta ike ahịa.
Kandụl ọ bụla ga - anọchite anya ọnụahịa ọnụahịa maka oge ị họọrọ. Iji maa atụ, mgbe ị na-amụ otu eserese kwa ụbọchị, kandụl nke ọ bụla ga-eme ihe ngosi iji mechie oghere, imeghe, na elu na nke ala maka ụbọchị ọ bụla.
Echefula, ezigbo ụzọ ndị ahịa ga-esi nweta chaatị ndị a ma nweta ọtụtụ n'ime ha bụ ịmalite site na akaụntụ akaụntụ ngosi. Nwere ike a na-ahụ a Forex ngosi akaụntụ site na gị ore. Ọ ga - enyere gị aka ime omume tupu ị banye imi wee bido jiri ego ị tara ahụhụ na-azụ.
Atụmatụ Forex Trading na Sistem
Ọ bụrụ na ị na-amalite ụwa nke Forex, ọ dị mkpa ka ị mụta ins na outs nke atụmatụ aghụghọ. Enweghị usoro ahia dị mma karịa nke na-esote, yabụ ịkwesịrị ịchọpụta ihe na-arụ ọrụ maka gị na ebumnuche ego gị ogologo oge.
N'okpuru ebe anyị depụtara ụfọdụ atụmatụ azụmaahịa azụmaahịa a na-ejikarị.
Ịzụ ahịa Swing
A maara nke a dị ka usoro usoro-oge (ma ọ bụ ịbịaru). Ịzụ ahịa swing na-etinye uche nke ukwuu na nnukwu foto ma a bịa na mmegharị ọnụahịa. Fọdụ ndị ahịa na-eji azụ ahịa mgbagharị dịka ụzọ iji mekwuo ahịa ha kwa ụbọchị. Zụ ahịa swing pụtara na ị nwere ike ịhapụ azụmaahịa gị mepere emepe ụbọchị ma ọ bụ izu n’otu oge.
Na mkpirisi, Forex scalping na-eji ndị ahịa chọrọ ịme ọtụtụ ahịa na otu ụzọ, na-enweta uru nke mmegharị ọnụahịa pere mpe n'oge ụbọchị ahia.
N'ikwu okwu n'ozuzu, ịchafụ ga-agụnye ịzụrụ na ire ahịa n'ime obere nkeji, ma ọ bụ nkeji ole na ole. Strategydị usoro azụmaahịa a na-eme ka ndị ahịa nwee ike ịme obere uru dị iche iche, ha niile na-agbakọkọta ọnụ iji nwee nnukwu uru.
Tradingzụ ahịa azụmaahịa bụ ụzọ aghụghọ iji zụọ ahịa, ọ na-elekwasịkwa anya na ọnọdụ ọnụahịa oge elekere 1-4. Anyị na-eche na nke a bụ nnukwu ahia maka ndị mbido n'ihi obere oge azụmahịa ahụ na-emeghe. Razụ ahịa Intraday na-enyekwa ndị ahịa ntinye na nkwụsị-atụmatụ aghụghọ ma were ya dị ka ihe egwu dị ala.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịzụ ahịa na nkasi obi nke ụlọ gị, ị ga-achọ ịchọta usoro azụmaahịa azụmaahịa na-egbo mkpa gị. E nwere ọtụtụ narị ịhọrọ site na ya, yabụ itinye oge ụfọdụ n'ịchọ onye na-ere ahịa kwesịrị ekwesị dị ezigbo mkpa.
Fọdụ n'ime ihe ndị ị chọrọ iji lelee anya dị ka edepụtara n'okpuru:
Tụkwasị obi na Broka gị
Anyị chere na ọ dịka ihe dị mkpa maka udo nke uche gị dịka ọ dị maka obere akpa azụmaahịa gị iji tụkwasị obi na onye na-azụ ahịa azụmaahịa gị. Mgbe ịchọtara onye ị ga-achọ ịrụ ọrụ, anyị na-akwado ịlele na ị nwere obi ụtọ na isi ihe ole na ole:
Speedy igbu nke data nyefe
Izi ezi nke kwuru
Nhazi ngwa ngwa
Nkwado ndị ahịa nwere ntụkwasị obi
Oge mmepe nke kwekọrọ na ahịa Forex (24/7)
Ọ bụrụ na onye na-ere ahịa azụmaahịa gị na-enye ọrụ niile dị n'elu (n'ụzọ ị tụkwasịrị obi), nke a ga-eme ka ahụmịhe azụmaahịa gị naanị. Ọ ga - enyere gị aka ịme ohere ọhụụ kachasị ọhụrụ n'oge kwesịrị ekwesị.
Imirikiti ndị na-ere ahịa ego ga-enye gị ohere ịzụ ahịa akaụntụ gị n'adabereghị. Nke a pụtara na ịkwesighi ịrịọ maka onye na-ere ahịa gị ime ihe na nnọchite gị. Nwere ike ịme ihe ọ bụla n'ahịa ọ bụla ngwa ngwa ma rụọ ọrụ nke ọma ma nwee ike ịchịkwa ọnọdụ na-emeghe dị ka na mgbe ha gbagote.
Ngwurugwu ahia ahia a kacha mara amara ga-enwe nyocha dị iche iche nke teknụzụ na ngwá ọrụ ịzụ ahịa nke ị nwere n'aka gị. Nwere ike ịchọpụta na ụfọdụ nyiwe na-enye ihe ngosi agbakwunyere, ebe ndị ọzọ na-enye plethora nke nyocha dị mkpa na nyocha teknụzụ ka ị mụọ. Anyị na-eche na atụmatụ ndị ọzọ nke onye na-ere ahịa nwere, nke ka mma. Ma, ọ dabere na ụdị ịzụ ahịa gị.
Inwe ohere inweta ozi akụkọ ego dị ugbu a, ọtụtụ ọnụahịa eserese na teknụzụ ga-eme ka njem azụmaahịa gị dịkwuo mma ma nyere gị aka ịghọ ezigbo onye ahịa ma emechaa Ihe omuma atu nke uzo ahia di mfe ma di mfe bu Meta Trader 4/5. Ọtụtụ ndị na-ere ahịa Forex na-enye nyiwe ndị a, nke dị mma. Ma ọ bụ eserese dị elu ma ọ bụ akụkọ data ahịa dị ndụ, usoro ntanetị ndị a na-ewu ewu maka ihe kpatara ya.
Họrọ onye ahia ahia nke nwere ikikere ma debe ya. Nke a ga-enye gị udo nke uche na gị trading akaụntụ na ozi gbasara gị na-zuru ezu na-echebe.
N'ịga n'ihu usoro ihe ọmụmụ a, ndị otu anyị nwere ndị ọkachamara etinyela ndepụta nke ndị na-ere ahịa azụmaahịa a na-atụ anya ka ị tụlee. Na nke ahụ kwuru, ịkwesịrị ịlele ụdị usoro nchịkwa ndị na-ere ahịa na-akwadoro. Anyị na-ahọrọ ahụ ndị a ma ama dị ka UK FCA, Australia ASIC, ma ọ bụ CySEC na Saịprọs.
Nka na ụzụ Indicators
N'akụkụ a nke usoro iwu anyị, anyị ga-atụle ụfọdụ n'ime njirimara ndị ọkachamara kachasị ewu ewu nke ndị ahịa na-azụ ahịa na-eji. Ndị a na-enye gị ohere ịme nyocha eserese na-emecha - nyochaa ụzọ otu ụzọ ego ga-esi gafere obere oge.
SMA (Nkezi Mfe Nfe)
Ọnụ ọgụgụ na-agagharị agagharị (SMA) maara nke ọma n'etiti ndị ahịa azụmaahịa. A na-akpọ atụmatụ a dị ka ihe na-agbaghara n'ihi na ọ na-arụ ọrụ na nwayọọ karịa ọnụahịa ahịa ugbu a. Ihe ngosi azụmaahịa SMA na-elekwasị anya na akụkọ ihe mere eme nke ọnụọgụ ọnụọgụ data karịa atụmatụ ndị ọzọ, na-eme ka ọ rụọ ọrụ nke ukwuu mgbe ị na-ahụ usoro na-emekarị.
Ọ bụrụ na oge dị mkpirikpi na-agagharị agafe dị elu karịa ogologo oge na-agagharị agafe - nke ahụ bụ ihe ịrịba ama ọnụahịa kachasị nso dị elu karịa ọnụahịa mbụ. Nwere ike were nke a dị ka izu mgbaàmà n'ihi akara nke usoro ugwu na ahịa. N'ezie, ọ bụrụ na ndị ọzọ na-eme, mgbe ahụ nke a ga-egosi na a na-ere ọnọdụ bụ nwere ike na-eme!
Osimiri donchian bụ ihe ngosi ntanetị nke na-enye onye na-ere ahịa ihe mgbanwe. Nwere ike ịhọrọ oge nke gị, dịka mmebi ụbọchị iri abụọ. N'ime ime nke a, a ga-egosipụta ihe ngosi na-esote site na iji ala dị ala na nke kachasị elu n'ime oge 20.
Nkwụsịtụ na ọwa ga-akpali otu n'ime iwu abụọ a:
ịzụta: N'ime oge 20 gara aga ọnụahịa ahịa karịrị nke kachasị elu
Ree: N'ime oge 20 gara aga ọnụahịa ahịa karịrị ọnụ ala kachasị dị ala
Enwere ike ịlele ọnụọgụ na-agagharị nke ọwa donchian n'etiti ebe ọ bụla site na ụbọchị 20 ruo ụbọchị 300. Ntuziaka nke mkpụmkpụ obere oge na-agagharị na-ekpebi ụzọ a ga-ekwe.
Mgbe ị na-atụle ọnọdụ mmeghe gị enwere nhọrọ abụọ:
Short: Ogologo agagharị nke oge gara aga dị elu karịa nkezi na-agagharị nke ụbọchị 20.
Ogologo oge: Ogologo ntụgharị nke oge gara aga dị ala karịa nkezi na-agagharị nke ụbọchị 25.
Ọ bụrụ na ị mepee ogologo ọnọdụ mana ahịa ahụ dara n'okpuru oke a kpọtụrụ aha, ị ga-achọ ire iji wepu ọnọdụ gị.
A 'breakout' bu ihe ahia ahia, nke ana akpo ya dika nkwado breakout. A na-eche breakout ka ọ bụrụ usoro dị mkpirikpi, ebe ahịa na-agbanwe n'etiti ndị agha nkwado na ndị na-eguzogide ndị agha. Ma njedebe nkwado ọ dị ala ma ọ bụ karịa - isi ihe mgbaàmà mgbapụta na-apụta bụ mgbe ahịa gafere oke ndị ahụ. Mgbe obula enwere uzo ohuru, aghapu aghaghi ime.
Nyochaa oge ezumike ndị a bụ ụzọ dị mma maka gị dị ka onye na-azụ ahịa iji gbalịa ịkọ ma amụma ọhụụ ọ na-amalite. N'ezie, ọ nweghị nkwa ọ bụla maka izi ezi nke breakout na-egosi usoro ọhụụ. Dị ka ndị dị otú a, ị nwere ike ikpebi iji ihe nkwụsị iji nye onwe gị ohere ka mma ịchekwa ego gị.
Ichebe iwu ahịa gị site na mmegharị ọ bụla na-adịghị mma na mberede dị ezigbo mkpa. Na-eso nyocha nyocha na ahịa ego, akụkọ ga-enyere gị aka ime nke a. Can nwere ike inye onwe gị nghọta ka mma banyere usoro njikwa ihe ize ndụ site na ịnwale usoro ịre ahịa azụmaahịa ma were ụfọdụ atụmatụ atụmatụ azụmaahịa gị maka ule nyocha.
N'ezie Forex: Ihe egwu
Mgbe a bịara n'ịzụ ahịa, enwere mgbe ụfọdụ ihe egwu dị na ya. E kwuwerị, ị ga-eji ego gị na-azụ ahịa.
E depụtara ụfọdụ n'ime ihe egwu ị ga-elebanye anya maka mgbe azụmaahịa azụmaahịa edepụtara n'okpuru:
1 egwu: leverage
Dika anyi meturu na mbu na ihe omuma a, itinye ego nwere ike ikere oke na ahia gi - ma odi nma ma di nma. N'aka ozo, ka ihe itinye ego gi n’iru karie, nke ka uku uru gi (ma o bu mbibi) ga-aba. Ihe ize ndụ bụ mgbe niile yana ịkwalite uru gị, ọ nwere ike ịrụ ọrụ megide gị ma bulie mfu gị. Ka o siri dị, a dụrụ gị ọdụ ka ị belata oke itinye ego ị na-etinye n'ọrụ mgbe ị na-amalite.
Egwu 2: Mmasị ọnụego
Mgbe ọmụrụ nwa nke otu mba dara, ego nke mba a na-ekwu okwu ga-adịwanye ike. Ego na-adịghị ike na-eme ka ndị na-etinye ego wepụrụ ego. N'ihi enweghị ọkọnọ na ọchịchọ, nke a pụtara na ị nwere ike ịta ahụhụ ọkwa volatility na mgbasawanye.
N'aka nke ọzọ, mgbe ego na-ebili, ọ ga-abụ mmiri mmiri. Ihe mmiri mmiri na-ebuwanye ibu, ka ndị mmadụ na-etinye ego, ma na-agbasa agbasa / volatility.
Ihe egwu 3: Azụmahịa
N'oge ụfọdụ n'oge nkwekọrịta ahụ, ọnụego mgbanwe nwere ike ghara ịdị ike n'ahịa. A maara nke a dị ka nsogbu azụmahịa. Isi ihe kpatara mgbanwe mgbanwe ego na-abụkarị ọdịiche na mpaghara oge na ọnụego mgbanwe. Ogologo oge gafere n'etiti ịbanye na mmechi nke nkwekọrịta, nke ka njọ n'ihe ize ndụ nke mgbanwe ndị a na-ewere ọnọdụ.
Kedu Forex Broker iji?
Dị ka anyị kwuru na ntuziaka anyị niile, ịkwesịrị iji onye na-atụkwasị obi na ntụkwasị obi na-azụ ahịa iji zụọ ahịa azụmaahịa na ntanetị. Ọ bụ ezie na anyị atụlewo ụfọdụ usoro nyocha ịchọrọ iji tụlee mgbe ị na-ahọrọ ikpo okwu, nke a nwere ike iwe oge.
Dị ka ndị dị otú a, n'okpuru ebe a, ị ga-ahụ nhọrọ nke ndị na-ewu ewu na-ewu ewu nke ndị ahịa azụmaahịa na-eji.
1. eToro - Best Forex Platform for Beginners
eToro bụ ezigbo nhọrọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite site na ikpo okwu azụmaahịa. Ya mere, onye zụrụ ahia ahụ ruru eru maka ọhụụ ọhụụ. Nwere ike ahia ọtụtụ ego, na ọ dịghị commlọrụ na ebubo ndị ọzọ karịa mgbasa. Akwụkwọ ikike FCA, CySEC, na ASIC nyere ikike - eToro nwere ezigbo aha. Nwere ike itinye na debit / kaadị ego, e-obere akpa, ma ọ bụ akaụntụ akụ. Opekempe nkwụnye ego na-amalite na $ 200, na nwepu ego na-eri naanị $ 5.
Ọbụghị naanị na ị nwere ike ịmalite na onye na-ere ahịa a naanị $ 100, mana ị nwere ike ịzụ ahịa n'efu site na akụrụngwa akaụntụ ngosi. Nke kachasị mkpa, a na-achịkwa onye na-ere ahịa a site na otu ASIC.
AVATrade na-ewu ewu na ndị ahịa na-achọ ọtụtụ onyinye nke ngwaọrụ na atụmatụ. Ma ị họrọ MT4 ma ọ bụ usoro ikpo okwu AVATrade, ị ga-enwe ike ịnweta nghọta ahịa, ihe ngosipụta teknụzụ, yana ngwa ọgụgụ eserese eserese dị elu. Ihe ikpo okwu anaghị akwụ ụgwọ ọ bụla, ma nkwụnye ego bụ n'efu. Isi ụzọ abụọ na-abịa na mgbasa nke n'okpuru 1 pip.
Usoro iwu anyị emeela ka anyị mata ihe ngosi dị mfe, mana nke na-eweta ozi banyere azụmaahịa n'ịntanetị. Anyị na-eche na nghọta nyocha nke teknụzụ na ụkpụrụ macroeconomic nke ụkpụrụ ego dị ezigbo mkpa. Ozugbo inwere ihe ndị bụ isi, ị nọ n'ọnọdụ dị ukwuu iji nwee ike itinye atụmatụ azụmaahịa gị n'ọrụ. Nke a ga - enyere gị aka ịghọ onye na - azụ ahịa nke ọma karịa ka emechara.
Y’oburu na ibu ahia ahia nke choro iji obere ego mee ihe, igha achota ụbọchị trading na ịzụ ahịa swing bụ nhọrọ dị mma maka gị. N'ihi ọdịdị dị mkpirikpi nke atụmatụ atụmatụ ndị a, nke a na-apụtakarị ịnweta obere uru, mana na-agakarị.
Na ngwụcha, anyị nwere olile anya na usoro azụmaahịa a enyerela aka na ịme ka ị bụrụ onye azụmaahịa azụmaahịa nwere ntụkwasị obi. Ihe ị ga - eme ugbu a bụ ịzụ ahịa ma nwee olile anya na - enweta uru na - agbanwe agbanwe. Ọ bụrụ na ị ka na-atụ ụjọ maka ịmaba, mgbe ahụ ọ nweghị ihe dị njọ na ịmalite na akaụntụ ngosi ngosi ebe ị ga-ahụ ụkwụ gị.
Emelitere ikpeazụ: February 8th, 2021